मेरो श्रीमानको बहिनी श्रीमान् हुनुहुन्छ? यो प्रश्न अक्सर नव निर्मित पत्नी मा उत्पन्न हुन्छ। पारिवारिक जीवन स्थापना गर्न साथै, यो पति नातेदार संग सम्पर्क आफ्नो बहिनी र उनको परिवार सहित निर्माण गर्न अब आवश्यक छ। हेरौं, यो वृक्ष मा पतन व्यक्तिलाई।
मलाई कसले बहिनीका पति पति kinship को अर्थ?
यो प्रश्नको जवाफ अघि, पत्ता लगाउन के सम्बन्ध प्रकार मा सबै अवस्थित चोट छैन। kinship, विवाह (सम्पत्ति) र नजिक असम्बन्धित सम्बन्ध द्वारा kinship: त्यहाँ निम्न नाम छ भनेर3मुख्य समूहहरू छन्।
हजुरबा हजुरआमाले, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, aunts, अंकल,: consanguinity को सिस्टम परिवार संगठनको निम्न प्रतिनिधिको समावेश grandsons, granddaughters, भतीजे, Nieces, ठूलो-हजुरबा हजुरआमाले, हजुरबा हजुरआमाले, पुर्खाहरूको। र पनि जीनस को संस्थापक, यदि जानिन्छ, को पुर्खा रूपमा उल्लेख।
, Devereaux-व्यवस्था, मित्र, मित्र, छोरा छोरी-मा-व्यवस्था, बुबा, सासू, देवर-व्यवस्था: समूह kinship विवाह (सम्पत्ति) निम्न नातेदार पति र पत्नी गठन।
सम्बन्ध नयाँ प्रणाली godparents, adoptees, adoptions, stepchild, stepdaughter, सौतेनि, सौतेनी आमा, नाम पिता र आमा गठन।
kinship को डिग्री निर्धारण
आधुनिक मानिसहरू यसलाई आवश्यक छ जब, आफ्नो सम्बन्ध हदसम्म सधैं चिन्दैनन्। यसलाई सधैं उपयोगी हुँदा आफ्नो मा "नेभिगेट" थाहा गर्न , kinship सम्बन्ध तिनीहरूले व्यापक झनै भने।
यो संकल्पलाई कि उल्लेख गर्नुपर्छ सम्बन्ध डिग्री consanguinity को एक समूह मात्र सम्भव छ। फारम बन्धन र पुस्ताका संख्या आधारमा, मा मीनार: consanguinity, समेकित, consanguinity, uterine, cousins, दोस्रो cousins, grandaughter सम्बन्ध।
Kinship विवाह गरेर - यो के हो?
को spouses प्रत्येक, यो हो भने, को पाठ्यक्रम, एक अनाथ, नातेदार छ। वैवाहिक समयमा तिनीहरूले प्रत्येक अन्य cousins बन्न - विवाह गरेर सम्बन्धित। एक सम्बन्ध यस्तो को समापन संग संघ समाप्त।
मेरो श्रीमानको बहिनी श्रीमान् हुनुहुन्छ? हामी जवाफ पत्ता
सबै माथि, हामी-व्यवस्था छ आफ्नो पति एक प्रिय बहिनी छ भने, तपाईं, छ। त्यो विवाह रहन्छ भने, पतिको तपाईंलाई-व्यवस्था, बहिनीहरूको विवाह गर्दै सबै मानिसहरू यस्तो नाम किनभने ल्याए।
हामी लगभग सबै हामी धेरै धेरै माया गर्छु र तिनीहरूलाई आनन्द इच्छा कसलाई cousins, छ। हामीलाई छ जो मेरो श्रीमानको भान्जा - ढिलो होस् वा चाँडो तिनीहरूले आफ्नै परिवार सिर्जना, र त्यसपछि उनको परिवार लाग्छ? उनले एक भाइ-रूपमा छ एक एक बहिनी विवाह मा-व्यवस्था भनिन्छ पनि cousins मानिस,।
मात्र एक जोडीलाई, तर पत्नी एक बहिनी हुन सक्छ। त्यो बारी मा, आफ्नो बहिनी-बहिनी र उनको पति, क्रमशः, एक नातेदार को पति को लागि खाता। अब तपाईं पति को नाम थाहा छौँ पत्नीको बहिनी।
निष्कर्षमा म द्वारा र ठूलो छ, कि थप्न चाहनुहुन्छ, यो कसैले गर्न छ जो जो कुरा छैन। मुख्य कुरा हो - यो हुनत पनि बलियो छैन, राम्रो, तर दुवै पक्षले नयाँ परिवार नातेदार बीच बराबर र आदर सम्बन्ध।
परिभाषा लागि जाँदा, तिनीहरूले शायद आधुनिक समाजमा प्रयोग गरिन्छ। यो किनभने बारम्बार divorces र सम्बन्ध freer शैली को, अघिल्लो पुस्ताका, तर आज लागि गरिएको थियो, शब्दावली को दैनिक जीवनमा प्रयोग, यो आवश्यक छ।
तर, यो जान्न सधैं रोचक छ: मेरो श्रीमानको बहिनीका पति र सम्बन्ध peculiar प्रकारको अन्य सदस्यहरूको छ जो ...
ठूलो मानिसहरूको मृत्यु मास्क। र कसरी किन मृत्यु मास्क बनाउने?
व्यभिचार - यो भविष्यमा वा ठूलो पापको लागि एउटा पाठ हो?
धेरै स्वादिष्ट माछा sockeye: विभिन्न तरिकामा यसलाई तयार
इवान ग्रोजनी: व्यक्तित्व विशेषताहरु छोटकरीमा। को Ivana Groznogo मूल्यांकन
'Rinfoltil' श्रृंखला हो। समीक्षा, वर्णन
Lermontov गरेको हजुरआमा को नाम के थियो? यस कवि जीवन मा घर महिला
Rectal suppositories प्रयोग "Prostatilen जिंक" निर्देशन
Paracetamol तापमान छ, वा डाक्टर लागि प्रतीक्षा
कसरी खमीर संक्रमण छुटकारा प्राप्त गर्न?
एक कार मा स्पिकरफोन: कसरी गर्न कसरी समायोजन गर्न कसरी जडान गर्न?